सफलताको सूत्र यस्तो छ, लागु गर्नुभयो भने हुनेछ आश्चर्यजनक परिवर्तन
November 13, 2017 January 1, 2019 Internet Khabar
काठमाडौं । जीवन बाँच्नका लागि रोटी, कपडा र घर आवश्यक हुन्छ तर एउटा अर्को कुरा पनि जरूरी हुन्छ। के होला त्यो ?
सफलता नै त्यो आवश्यक चीज हो जसले जीवनलाई पूर्णता दिन्छ । तपाईं सफल भएर नै आफ्नो फरक लक्ष्य बनाउन सक्नुहुन्छ।
संसारमा दुईथरी मानिस छन् : सफल र असफल । सफल मानिसले के गरेर लगातार सफलता हासिल गरेका हुन् अनि असफल मानिसले कुन गल्ती बारम्बार दोहो–याएर असफल भइरहेका हुन् ?
तपाईं पनि सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
के हुन् ती कुरा ?
तपाईं आफूवरिपरिको वातावरणबाट प्रभावित भएर गलत लक्ष्य छान्न सक्नुहुन्छ। नबुझेको र रुचि नभएको क्षेत्रलाई तपाईंले छान्न सक्नुहुन्छ । यसो हुँदा तपाईं अघि बढ्नुको साटो पछि पर्दै जानुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो रुचि रहेको र बुझेको क्षेत्र नै छान्नुहोला।
आफ्नो रुचिको लक्ष्य निर्धारण गरेपछि त्यस लक्ष्यलाई पाउनका लागि तपाईंमा एकाग्रता हुनु जरूरी हुन्छ । तपाईंको दृष्टि लक्ष्यसँग जोडिएका सबै कुरामा हुनुपर्छ । एकाग्रता सफल व्यक्तिहरूको गुण हो।
आचार्य चाणक्यको नीति अपनाएर तपाईं आफ्ना लागि सफलताको बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ । यस नीतिअनुसार जुन काम गरेपनि पूरै शक्तिका साथ गर्नुपर्छ । जतिसुकै ठूलो वा सानो काम भएपनि शक्ति लगाएर गर्नुपर्छ। अवश्य सफल भइन्छ।
सफल व्यक्तिहरू आफूले उठाएका हरेक कदमको जिम्मेवारी आफैं लिन्छन्। यसो गर्दा उनीहरूमा निर्णयप्रति सतर्कता बढ्छ र सोचविचार गरेर कुनै लक्ष्यसम्म पुग्ने गुण विकसित हुन्छ। यसबाट नै सफलताको सिँढी चढ्न सजिलो हुन्छ । असफल मानिसहरू नबुझिकनै हतारमा निर्णय लिन्छन् र अपेक्षाविपरीतको परिणाम आएमा त्यसको दोष अरूमाथि थोपर्छन्।
प्रत्येक व्यक्तिले गल्ती गर्छ तर विवेकशील मानिसले गल्ती दोहो–याउँदैन । सफल हुनका लागि गल्तीबाट सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै समयको भरपूर सदुपयोग गर्ने, सफल मानिसको संगत गर्ने, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, आफूमाथि विश्वास गर्ने मानिस पनि सफल हुन्छन्। एजेन्सी
November 13, 2017 January 1, 2019
हत्केला चिलाउँदा के पैसा आउँछ ?
आत्महत्याको संकेत कसरी पहिचान गर्ने ?
September 16, 2016 July 31, 2018
सौन्दर्यतालाई सधै आफूसँगै राख्ने केही टिप्सहरू…
December 1, 2017 July 28, 2018
छैठौं इन्द्रिय के हो ? यसलाई कसरी सक्रिय पार्ने ?
भविष्यमा के हुँदै छ ? शरीरका अंग फरफराउदा थाहा हुन्छ
May 23, 2016 December 8, 2016
एक भारतीय आरोहीको मृत्यु, छ जना आरोही सम्पर्कविहीन